एक स्त्री रोग विशेषज्ञले आफ्नै विर्य प्रयोग गरेर धमाधम १७ वटा बच्चा जन्माएको रहस्य खुलेपछि… – Sanjal Nepal
Homeस्वास्थ्य /जिबनशैलीएक स्त्री रोग विशेषज्ञले आफ्नै विर्य प्रयोग गरेर धमाधम १७ वटा बच्चा जन्माएको रहस्य खुलेपछि…
एक स्त्री रोग विशेषज्ञले आफ्नै विर्य प्रयोग गरेर धमाधम १७ वटा बच्चा जन्माएको रहस्य खुलेपछि…
November 2, 2020 admin स्वास्थ्य /जिबनशैली 8662
एक स्त्री रोग विशेषज्ञले आफ्नै विर्य प्रयोग गरेर १७ वटा बच्चा जन्माएको खुलेको छ । उक्त डाक्टरले महिलाहरुलाई थाहा नै नदिई आफ्नै विर्य प्रयोग गरेर कृतिम गर्भाधान गरेको खुलेको हो ।
नदेरल्याण्डको इज्वलास्थित तत्कालिन सोफिया हस्पिटनल हालको इशाला हस्पिटनमा कार्यरत स्त्री रोग विशेषज्ञ जान वाइल्डशटले उक्त उक्त कार्य गरेको र’हस्य खुलेको हो ।
वाइल्डशटले सन् १९८१ देखि १९९३ सम्म सोही अस्पतालमार्फत उक्त कार्य रहेको अस्पतालले जनाएको छ ।
बच्चाहरुको डीएनए परीक्षण गर्दा डाक्टरसँग मिलेपछि उक्त कुराको र’हस्य बाहिर आएको हो । यसबारेमा अस्पतालले मंगलबार एक विज्ञप्ती नै जारी गर्दै भनेको छ, ‘स्त्री रोग विशेषज्ञ आफैले परिवालाई थाहा नै नदिई यस्तो कार्य गर्नु नैतिक दृष्टिकोणबाट हामीलाई स्वीकार्य छैन ।’
टन्टलापुर घाममा ५० केजीको भारी बोक्दा बोक्दै बिसाएर निदाए यी बालक , हेर्नुहोस् यो हृदयविदारक तस्विर
एका बिहानै बिसाल इच्छाधारी नागिन को दर्शन सँगै ॐ लेखेर एक Share गर्नुस सात दिनभित्रमा तपाइले सोचेको काम बन्नेछ ॐ ॐ ॐ
सिस्नु के हो ? निकै औषधिय गुणले भरिपुर्ण सिस्नु कसरी खाने ?
December 16, 2020 admin स्वास्थ्य /जिबनशैली 5812
सिस्नु के हो ? यस विषयमा सवैलाई थाहा भए पनि फाइदाका विषयमा सवैलाई थाहा नहुन सक्छ । सिन्नुमा पाइने विभिन्न भिटामिनले मानव स्वास्थ्यलाई निकै फाइदा पुर्‍याउने गर्छ । सिस्नोको महत्वबारे बुझेकै कारण अहिले शहरका ठूला–ठूला
April 11, 2021 admin स्वास्थ्य /जिबनशैली 1306
एजेन्सी । कुनै पनि पुरुषले एक पटकमा एकजना महिलालाई गर्भवती बनाउन सक्छ र त्यो गर्भको बच्चा मेरो हो भन्न सक्छ । एकै पटकमा ६ जना महिलालाई गर्भवती बनाउन कुनै पुरुषले सक्दैनन् । तर नाइजेरियाका प्रिटी
कस्तो यो’निमा ग’र्दा धेरै म’जा आउँ’छ का’लो कि से’तो
April 26, 2021 admin स्वास्थ्य /जिबनशैली 1398
महिलाहरुले आफुलाई स्वस्थ र फिट राख्नको लागि निकै मेहनत गर्छन । तर आफ्नो स्त”नलाई कसरी स्वस्थ राख्ने भन्नेमा अनभिज्ञ नै छन् र खासै केहि पनि गरेको देखिदैन । स्तन मसाजमात्रै यौ”न सामथ्र्यको लागि मात्र नभएर
LEX 18 agenda conversation: Job club (486297)
सञ्जेललाई कुटपिट गर्ने कर्मचारी बर्खास्त, अभद्र व्यवहार मुद्दामा म्याद थप (458406)
Hello world! (384415)
A above Googler and career teach says you shouldn’t at all times flip your ardour intoaabounding-time job (351928)